SS haingon-trano taratasy
SS ascenseur lamba / Door
Stainless Steel fisarahana
Kitchen trano fanatobiana entana
Sehatra Of Business
Stainless vy haingon-trano taratasy
Mirror Stainless vy Hairline Stainless vy loko Stainless vy
ascenseur varavarana lamba
Manana fifandraisana mafy amin'ny ascenseur orinasa
Manome Stainless vy lamba, fisarahana sy ny FABRICATION manohitra customed fangatahana.
Browse iadian-kevitra manaraka ireto ny vokatra vaovao isika
FOSHAN FEROSTEEL CO., LTD dia naorina tamin'ny 2008. Taorian'ny taona maro ny fampandrosoana sy ny ezaka rehetra mpiray mpiasa, dia manana ny manontolo Stainless vy fitaovana famokarana sy ny fikarakarana ary isan-karazany ny entam-barotra baovao sosialy. Ny mpiara-miombon'antoka dia hita amin'ny faritra maro eto amin'izao tontolo izao. Lasa fanta-daza Stainless vy matihanina ambony fitsaboana sy ny Stainless vy avo-toeram-piasana farany fanao any South China. Ny orinasa dia mikendry ny "izao tontolo izao ho maro loko kokoa" mba hanome ny olona arovany amin'ny kalitao ny vokatra sy ny tolotra matihanina. Manana rafitra fanompoana manontolo ho an'ny fikarohana siantifika, famolavolana, famokarana, fanaovana fitiliana sy ny fitsaboana ny vacuum ambonin'ny coating, electroplating, voapetaka ny rano, sandblasting, etching, embossing, sy ny sary.
Ny orinasa no nampiditra am-polony maro lehibe sy salantsalany banga voapetaka mandeha ho azy, welding Nikosokosoka, Stainless vy sy Nikosokosoka welding fitaovana. Lalina fikarakarana ny Stainless vy isan-karazany injeniera ravaka vokatra.
Mahomby, varotra ekipa matihanina any ampitan-dranomasina dia tsy tapaka expanding.To hamorona toerana ho an'ny fampandrosoana mba hanatsarana ny zava-dehibe ny mpiasa, hanatsarana ny kalitaon'ny life.We foana nino mafy fa "ny asa lehibe kokoa, dia vao mainka sambatra."
Adiresy: A38-40, Building NO.5, Tancun 1 Road, Chencun, Shunde, Foshan, Sina